Sawirada la bixiyay ee Meizu 16s Pro ayaa muuqda | Androidsis
Waxaa imanaya taleefan casri ah oo casri ah oo waxqabad sare leh, oo sida muuqata isticmaali doona Qualcomm barnaamijkeedii ugu dambeeyay ee mobilada, kaas oo ah Snapdragon 855 Plus. Qalabkan aan tixraaceyno waa Meizu 16s Pro, iyo, mahadsanid ilaha caarada, waxaan awoodnay inaan soo bandhigno dhammaan bilicsanaanta, si loogu daro xogta aan soo aruurino horumarka dhow.
Meizu 16s waxaa la bilaabay dhamaadkii bishii Abriil ee sanadkan iyada oo Snapdragon 855 iyo astaamo kale iyo tilmaamo farsamo oo ku saabsan abtirsiinyada. Terminal-kan wuxuu ku faanaa naqshad si fiican loo shaqeeyay, oo leh geesaha ugu yar dhinaca hore, laakiin aan lahayn darajo iyo kamarad pop-up ah. Ku-xigeenkiisa, oo ah kala duwanaanshaha Pro ee aan hoos ugu dhaadhacno, ma soo bandhigi doono kala duwanaansho weyn illaa inta muuqaalka laga hadlayo, iyo waxa aan dhahno waxaa lagu xaqiijin karaa iyadoo la fiirinayo sawir la sifeeyay oo la shaandheeyey oo aan hadda ka laalaadinno.
Tani waa waxa Meizu 16s Pro u ekaan lahaa
Sawirka la bixiyay ee Meizu 16s Pro
Waxa ugu horreeya ee aan iftiiminno markaan aragno naqshadda Meizu 16s Pro sawirka soo socda ayaa ah taas wax isbedel ah kuma soo bandhigeyso shaashadeeda hore, sidoo kale waan eegnaa, iyo xagga dambe. Si kastaba ha noqotee, halkii kaliya lagu qalabeyn lahaa kamarad laba jibbaaran sida Meizu 16s ay sameyso, waxay hadda leedahay seddex dareemayaal gadaal ah, oo isku mid ah, taas oo ah mid taagan, oo ku taal isla boos.
Waxaa la sheegay inay la imaan doonto a 586-megapixel Sony IMX48 lens-ka aasaasiga ah iyo lens-ka telephoto 20-megapixel, Inkasta oo macluumaadka aan laga soo saarin dareemaheeda saddexaad, laakiin tani waxay noqon kartaa 8 ama 5 MP waxayna diirada saareysaa soo qabashada macluumaadka qaabka sawirka. Tooshka qaabeeya giraan-qaabeeya ayaa sidoo kale ka hooseeya qeybta kamaradda saddex-geesoodka ah.
Meizu wuxuu ku dhawaaqay taariikhda la siidaayo ee lakabkeeda u gaarka ah Flyme 8
Waxaa sidoo kale la filayaa inuu la yimaado isla Xalka sare ee Super AMOLED iyo akhristaha sawirka isku dhafan, iyo sidoo kale inaad la wadaagto waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha muhiimka ah iyo qeexitaannada farsamo ee Meizu 16s. Intaas waxaa sii dheer, waxay la imaan laheyd taageero si dhakhso ah loogu soo oogo 24 watts.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Tani waa sharraxaadda Meizu 16s Pro, calanka soo socda ee Snapdragon 855 Plus
OnePlus 7T Pro wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhigid